Tovolahy Namono Tena Rehefa Avy Nataon’ny Polisy Famotorana Tao Singapaoro · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Febroary 2016 4:54 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, 繁體中文, Español, 简体中文, English
Namono tena ny mpianatra iray 14 taona tao Singapaoro ora vitsy taorian'ny famotorana nataon'ny polisy azy noho izy voarohirohy tamina raharaham-pikasikasihan-tanana fametavetana iray, izay niteraka ny tokony handinihana indray ny paikam-pamotorana ofisialy ahafahan'ny polisy manadihady ireo ankizy tsy ampy taona na dia tsy eo anatrehan'ny ny ray aman-dreny, na mpikarakara, na olon-dehibe mpanolo-tsaina aza.
Nahatonga ny olona maro mitaky handinihana indray ny fomba fiasan’ ny polisy mikasika ny fomba mety sy sahaza amin'ny fisahanana ny ankizy sy ny sokajin'olona hafa marefo eo amin'ny vahoaka ny fahafatesany. Nanaiky izany ny polisy ary namoaka fanambarana milaza fa hanao izany:
Nahatsapa ny rain'i Lim fa tara loatra ny fandinihana indray:
Taorian'ny tatitra momba ny fahafatesan'i Lim, nizara ny fomba fitondran'ny polisy azy ireo tahaka izany mandritra ny taonan'ny fahatanoran'izy ireo ny sasany. Nisy mihitsy aza tranga iray izay zokiolona manana fahasembanana ara-tsaina no nosamborin'ny polisy ary natao famotorana tsy natrehan'ny havany.
Nihevitra ny vondrona mpiaro ny zon'olombelona Community Action Network (Tambajotra Miasa ho an'ny Fiarahamonina) fa afaka nosorohana ny fahafatesan'i Lim raha naneho hatairana manoloana ny fanadihadiana ankizy tsy ampy taona [tsy atrehin'olondehibe] ny olona rehetra nandray anjara tamin'ny fanadihadiana ity raharaha ity. “Nandrisika hametrahana fakantsary ao anatin'ny efitra fanaovana famotorana ihany koa izany mba hahatonga ny dingana ara-panadihadiana ho mangarahara kokoa:
Nandrisika ny polisy mba hanaja ny zon'ny voarohirohy, indrindra ny ankizy tsy ampy taona ny Fikambanam-behivavy Mikatroka sy Mikaroka, izay mifantoka kokoa amin'ny raharahan-kerisetra ara-nofo:
Ny antony voalohany mahatonga ny famonoan-tena dia ny fahakiviana sy harerahan-tsaina tsy voakarakara. Azo tsaboina ny harerahan-tsaina ary azo sorohina ny famonoan-tena. Mety mahazo fanampiana avy amin'ny laharan-telefonina fanohanana amin'ireo mitady hamono tena na tratran'ny krizy ara-pihetseham-po ianao. Tsidiho ny Befrienders.org raha hijery laharana fanampiana momba ny fisorohana ny famonoan-tena ao amin'ny firenenao.[naotin'ny mpanitsy amin'ny teny malagasy: indrisy fa tsy misy ny mpanolo-tsaina misoroka izany rehefa nijery ny tranonkala aho hatreto, asa sao dia mahafantatra ianareo?]